आमा ! अब न्यूरोडको बिष नमाग्नुस् है ! | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार आमा ! अब न्यूरोडको बिष नमाग्नुस् है !
सधैँझैँ गतसालको दशैँअगाडि मेरी आमासँग फोनमा कुरा भएको थियो । मैले घटस्थापनाको दिन आउँछु र के के लिएर आउनु पर्छ भनी सोधेको थिएँ । जवाफमा उहाँले भन्नुभयो- अब साडी चोलो केही ल्याउनु पर्दैन, घरमा भएको पनि सबै लगाएको छैन बरु गुँदपाक र पुष्टकारीहरू लिएर आइज, पाहुनाहरू र केटाकेटीलाई दिनु हुन्छ अरू थोक त सबै यहीँ छ केही लिएर आउनु पर्दैन ।
म पढ्ने सिलसिलामा काठमाडौं आएको बेलादेखि नै प्रत्येकचोटि घर जाँदा आमालाई मन पर्ने गुँदपाक नै लिएर जान्थेँ । प्राय: हाम्रा आफन्तहरू र पाहुनाहरूले पनि हाम्रो घरमा आउँदा गुँदपाक नै लिएर आउनुहुन्थ्यो । आमाले त्यो गुँदपाक टिकाएर राखी घरमा आउने छिमेकीहरू, पाहुनाहरू, नातिनातिनीहरूलाई बाँडेर खुवाउनु हुन्थ्यो । गुँदपाक बाँडेर दिँदा ल खानु फलानोले ल्याएको गुँदपाक अथवा फलानोले पठाएको, खाएर हेर्नु भन्नुहुन्थ्यो । आमा पनि मुख नमिठो हुँदा, के खाऊँ के खाऊँ हुँदा त्यही गुँदपाकको आनन्द लिनुहुन्थ्यो । मैले पनि घर जाँदा धेरैचोटि त्यही गुँदपाक र पहाडको चिउरासँग भोक मेटेको छु ।
विदेशमा बस्दा आफन्तहरूले पठाएको न्यूरोडगेटको गुँदपाक, लाखमरी, पुष्टकारी र तितौराहरूको स्वादमा म धेरैचोटि रमाएको थिएँ । विगतका दिनहरूको सम्झना गर्दै मैले पनि विदेशमा बस्ने आफन्तहरूलाई न्यूरोडगेटको गुँदपाक, लाखमरी, पुष्टकारी र तितौराहरू उपहार लगेको छु । उनीहरूले त्यो गुँदपाक, लाखमरी, पुष्टकारी र तितौराहरू रमाउँदै खाएको दृश्य मेरो आँखाअगाडि ताजै छ । एक वर्षअघिको कुरो हो, मेरो मिल्ने साथी सरकारी काममा पश्चिम नेपालको भ्रमणमा गएको थियो । उसलाई मैले त्यही न्यूरोडगेटको गुँदपाक पसलबाट पुष्टकारी र तितौराहरू किनेर पठाएको थिएँ । पुष्टकारी मुखमा खेलाउँदै उकाली चढ्दाको रमाइलो क्षणको बयान गर्दै मलाई उसले फोन गरेको थियो । काठमाडौंमा बसी पश्चिम नेपालको पहाडी उकालीको कुरा सुन्दा मलाई पनि रमाइलो लागेको थियो । ‘उकाली र उ कालो’ (पहाडी उकाली र कालो पुष्टकारी) सँगको यात्रा अविस्मरणीय छ भनी ऊ जिस्किँदा मैले ‘अर्कोचोटि गयौ भने गुँदपाक पनि किनिदिन्छु’ भनेको थियो ।
यति मात्र कहाँ हो र ? हाम्रो समाज अनि संस्कारमा पनि मिठाइको सम्बन्ध गहिरो छ । दशैँ, तिहार, तीज, औंसी, अन्य चार्डपर्व र एसएलसी वा अन्य परीक्षाहरूको नतिजा प्रकाशनको बेला साँझ-बिहान न्यूरोडगेटको गुँदपाक पसल र मिठाइ पसलहरूमा लागेको लाइन सम्झँदा हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ कि मजस्ता लाखौँ नेपालीको सम्बन्ध त्यो गुँदपाक अनि ती मिठाइहरूसँग छ ।
नेपालीको महान् पर्व दशैँ मुखैमा आइसकेको छ । केही दिनअघि मैले आमा अनि आमालाई मन पर्ने गुँदपाक र पुष्टकारी सम्भFmदै थिएँ । अनायास एफएम रेडियोको एउटा कार्यक्रममा न्यूरोडगेट र अन्य मिठाइ पसलहरू सडेको मिठाइ, कुहिएको बोसो, आन्द्रा, ढलको पानी आदि अखाद्य तत्त्व मिसाई गुँदपाक तथा अन्य मिठाइहरू बनाएको खबर सुन्दा आङ सिरिङ्ग भएर आयो ।
मजस्ता लाखौं छोराछोरीले आफ्ना बुबाआमालाई मिठाइ हैन, बिष पो उपहार लगेर दिएका रहेछौं । अनि आमाहरूले त अहिलेसम्म गुँदपाक नाम गरेको बिष पो टिकाएर राखी घर-छिमेकीहरू, पाहुनाहरू, आफ्नै नातिनातिनीहरूलाई बाँडेर खुवाउनुभएको रहेछ । साथीहरूलाई माया गरेर बिष पो सेवन गराएका रहेछौं । यतिले नपुगेर सात समुद्रपारि रहेका आफन्तहरू र साथीभाइहरूलाई नासो भनी बिष पो पठाएका रहेछौं ।
चाडपर्व र सफलताका खुशियालीहरूमा बिषको आदानप्रदान गरी दीर्घायू र सफलताको शुभ-कामनाहरू बाँडेर हिँडेका रहेछौं । औंसी अनि दशैँको बेला आमा, बुबा अनि मान्यजनहरूको दीर्घायूको कामना गर्न र आशिर्वाद थाप्न भनी शहरबाट गाउँमा खोजीखोजी गएका हामीहरू त बिष खुवाउन पो गएका रहेछौं । दीर्घायूको नाममा अल्पायूको ट्याब्लेट पो बाँडेर, खुवाएर आएका रहेछौं । तिहारमा दाजुभाइको दीर्घायूको कामना गर्दै यमराजबाट खोस्ने भनी गएका चेलीहरूले त यमराज भेट्ने राजमार्ग पो बनाएका रहेछन् ।
श्रीमान नरेन्द्र मास्के अनि तपाईंजस्तै अमृतको प्यालामा बिष खुवाउने मिठाइवालाहरू ! तपाइंहरूलाई, आफूलाई जन्म दिने आमाजस्तै अन्य आमाहरूले पनि यो मिठाइ खान्छन् भन्ने सोच आएन हगि ? तपाईंहरूलाई दाजुभाइ, दिदीबहिनी अनि नाताकुटुम्बहरूले पनि यो मिठाइ खान्छन् भन्ने याद आएन हगि ?
अनि मानव जातिकै नष्ट गर्न तम्सेका यस्ता कालोबजारीलाई छोटो समयको जेल सजाय र मात्र ५० हजार रूपैयाँ जरिवानाको पुरस्कार दिने कार्य राज्यले गरिरहेको छ । त्यसो गर्नु भनेको पुन: यस्तै कामका लागि हौसला प्रदान गर्नु हो ।
अब गाउँघरमा बसिरहेका आमाहरूले न्यूरोड र अन्यत्रको गुँदपाकरुपी बिष नमाग्नु होला । घरमा जेजस्तो छ, त्यसैबाट सत्कार गर्नु होला । नत्र अञ्जानमा पाहुना, छिमेकी, आफन्तलाई बाँडेको बिषको पाप हामीहरूले भोग्नुपर्नेछ ।
सहकारीमा कर्मचारीको शोषण
सहकारी संस्था व्यावसायिक संस्था भए पनि त्यस किसिमको व्यवस्थापन छैन । संस्थाको सञ्चालक समितिले सहकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नियुक्ति गर्ने, सेवासुविधाहरू तोक्ने कार्यहरू गर्दछ । संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिहरू बनाउँछ ।
सहकारी संस्था समुदायमा आधारित व्यावसायिक संस्था भएकाले समुदायबाट योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू संस्थाको जनशक्ति हुन्छन् । शुरूआतमा संस्थाको आम्दानी बलियो हुँदैन । तसथ सहकारी संस्था शुरू गर्दा पहिलो छ महिना सञ्चालकहरू आफैँ मिलेर सञ्चालन गर्छन् । दोस्रो छ महिनामा आंशिक कर्मचारी नियुक्ति गरेर संस्था सञ्चालन गरिएको हुन्छ । संस्थाले प्रगति गर्दै जाने क्रममा जनशक्ति पनि थप्दै जानु र सेवासुविधा बढ्दै जानु स्वाभाविक हो । तर, जुन मात्रामा संस्थाको प्रगति भएको छ, त्यही मात्रामा सेवासुविधाहरू वृद्धि गरेन भने त्यहाँ जनशक्तिको मनोबल कमजोर हुने निश्चित छ ।
कर्मचारीलाई सेवासुविधा प्रदान गर्दा एउटा निश्चित आधार हुनुपर्छ । ती आधारहरूमध्ये सरकारको तलब स्केल, बजारको मूल्य र संस्थाको प्रगति अर्थात् पर्ल्स अनुगमन प्रणालीको आधार बढी चर्चित छ । तर, सहकारी संस्थाको तलबमान निर्धारणलाई हेर्दा ती आधारहरू अपनाइएको पाइँदैन । न त अन्य सुविधाहरू दिइएको पाइन्छ । सहकारी संस्था स्वायत्त छ भन्दैमा आधारहीन तलबमान तोक्ने र श्रम ऐनमा व्यवस्था भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नै नदिनु शोषण हो । वित्तीय सक्षमता नभएको सहकारी संस्थाले ती आधारहरूमा तलब दिन नसक्लान्, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, वित्तीय रूपमा सक्षम संस्थाले विनाआधार तलब निर्धारण गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिन हिच्किचाउनेजस्ता अव्यावहारिक नीतिले दक्ष र अनुभवी कर्मचारीहरूलाई आकर्षण गर्ने कुनै आधार हुँदैन । बरु भएका जनशक्ति पनि कहिले छोडेर जाने हो ठेगान हुँदैन ।
सहकारी संस्था भनेको आज खोल्ने र भोलि बन्द गर्ने पसल होइन । यो निरन्तर चलिरहने संस्था हो । सहकारी संस्थालाई निरन्तरता दिन र व्यवस्थित रूपमा चलाउन दक्ष कर्मचारीहरूको स्थायित्व आवश्यक छ । निरन्तर बहाली भइरहने वातावरण तयार गर्नसके मात्र संस्थालाई व्यवस्थित रूपमा स्थायित्व प्रदान गर्न टेवा पुग्छ ।
‘दालभात घरको खाऊ, पकेट खर्चका लागि संस्थामा दिनभरि काम गर’ भन्नेजस्तो तलब स्केलले कर्मचारीमा व्यावसायिकताको विकास हुँदैन । त्यहाँ सेवा र अभावले मात्र डेरा पाउँछ । आफू मरेर अरूलाई सेवा गर्न सकिँदैन । संस्थाले कमाएको पैसा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सदस्यहरूलाई खुवाउन सञ्चालकहरू चिन्तित हुन्छन् । तर, उक्त संस्थाले सो रकम कमाउन पसिना बगाउनेहरूका बारेमा सोच्ने प्रवृत्ति कम देखिन्छ । साथै, लाभांश पाउने सदस्यहरूले पनि संस्थाका कर्मचारीहरूको तलब स्केल कति छ भन्ने कुरामा चासो राखेको पाइँदैन । यसले ‘काम गर्ने कालु मकै खाने भालु’ भन्ने उदाहरणलाई प्रस्ट पार्छ ।
तलब कर्मचारीहरूको अधिकारको कुरा हो । उक्त कुरालाई नै कर्मचारीसँग सल्लाह नै नगरी सञ्चालक आफैँले निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिले सहकारी संस्थाको अगुवाहरूले कर्मचारी एवम् व्यवस्थापन पक्षलाई कुन दृष्टिमा हेरिरहेको छ, त्यो प्रस्ट हुन्छ । अझ सहकारीमा कर्मचारी एवम् प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ भनेर सञ्चालकहरू नै प्रबन्ध सञ्चालक बन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसरी प्रबन्धक हुँदा आफूले मागेको तलब स्केल दिन सञ्चालकहरू तयार हुने तर कर्मचारीलाई चाहिँ न्यूनतम तलब स्केल नै नदिनेजस्ता विभेदपूर्ण नीतिले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । यस्तो असमान र विभेदपूर्ण एवम् शोषणपूर्ण नीतिको मारमा सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरू पर्दै आइरहेका छन् ।
तसथ, सहकारी संस्थामा कर्मचारी प्रशासनलाई दक्ष, चुस्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन तलबमानका आधारहरू तय हुनुपर्छ । व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास हुने सुविधाहरू थप हुनैपर्छ । अनि मात्र सहकारी संस्थामा दक्ष कर्मचारीहरू आकर्षित हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ । नत्र सहकारी संस्था एउटा तालिमकेन्द्रका रूपमा मात्र विकास हुनेमा कुनै शङ्का छैन । नयाँ दक्ष कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्ने आधार नै नभएपछि सहकारी व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न पनि सक्दैन ।